Budlangile ubugebengu eMbali Unit 1 | News24
Budlangile ubugebengu eMbali Unit 1
ISITHOMBE: NOKULUNGA NGOBESE Bakhathazekile abahlali baselokishini Imbali Unit 1 ngobugebengu abathi budlangile kule ndawo. Bathi abasakwazi ngisho ukuthuma izingane esitolo ngoba ziphucwa imali ezisuke zithunywe ngayo.
UMA uzwa amazwi athi “letha imali yami”, baleka uzephule elokishini laseMbali Unit 1. La mazwi asetshenziswa ilaba abasolwa ngokuthi babamba inkunzi kuleli lokishi emini kabha.
Omunye wezakhamizi zakulo leli lokishi uthi ukudlanga kokuhlaselwa nokuphucwa imali nomakhalekhukhwini kwabantu sekuthuse abaningi. Uthe akugcini lapho njengoba manje sekufanele ukuthi uma uwashe, waneka kumele uqinisekise ukuthi izimpahla eziwashiwe ziyagadwa kanti futhi nokugqeza kudla lubi. Uthe kumanje abasakwazi ngisho ukuthuma izingane esitolo ngoba kwazona ziphucwa imali ezisuke zithunywe ngayo esitolo.
Lesi sakhamuzi sithe yize baye bazame ukuthi amaphoyisa nawo athathe indawo ngokugada kodwa lokhu kuphelela emoyeni njengoba lo mkhuba uqhubeka nokwanda kunokuthi uphele.
“Esikhathini esedlule emasontweni adlulile ngisendlini ngibuya emsebenzini ngizwe indoda emgwaqeni ibhongisa owenkomo. Ngithe uma ngiphuma ngibheka ngabona okungabafanyana kubaleka. Ngaphambi kokuba bangibone ngikhuza umhlola ngizwe bethi “letha imali yami,” kusho yena
Ubugebengu okuthiwa budlangile ukugqekeza, ukuthulwa kwezimpahla ocingweni lokuneka nokubanjwa inkunzi.
Ikhansela lika wadi-19 u-Caiphus Ndawonde uthe njengoba i-Community Policing Forum (CPF) ingasebenzi kahle ngenxa yepolitiki eke yaba khona kodwa abahlezi phansi dekle mayelana nokubhekana nesimo.
Uqhube wathi uyazi ngobugebengu obuqhubekayo kuleli lokishi kanti kumanje uphezu kwemizamo yokulwa nalokhu.
“Kumanje simatasatasa sihlela amakomiti azokwazi ukuthi amele izindawo ngezindawo (areas). Lokhu ngeke kube ukubhekelela indaba yobugebengu kuphela kodwa kuzosiza nokubhekelela ezinye izinkinga ezikhungethe umphakathi.
“Asihleli siyazama ukuthi silwisane nalokhu ngokuthi sihlanganise senze lamakomiti ukuze silwe nabo bonke lobugebengu obudlangile,” kusho uNdawonde.